Meesha lagu ciyaaro ee Metalco → Naqshadeynta Magaalooyinka Yaryar • Soo saare • Qaybiyaha
Casri ah garoonka ciyaarta Waxay u oggolaaneysaa madadaalo aan xadidnayn oo ammaan leh hawada furan maahan oo keliya carruurta da 'kasta leh, laakiin sidoo kale dhalinyarada.
Madadaalo lulaya iyo dhammaan aaladaha la dhigo goobta ciyaarta, gaar ahaan marka lagu qabto shirkadda asxaabta, waa hab fiican oo lagu qaato waqti firaaqo ah, isla mar ahaantaana lagu taageero horumarka nafsaaniga ah ee jirka.
view buuga alaabta internetka >> lub soo dejiso buugaagta >>
Goobaha carruurta lagu ciyaaro waxaan kula kulmi karnaa oo kaliya iskuulada iyo xanaanooyinka, laakiin sidoo kale jardiinooyinka iyo jardiinooyinka guryaha, maxaa yeelay waxaa la ogaa waqti dheer in la ciyaarka asxaabta ee hawada furan ay u saamaxeyso horumar bulsho iyo mid dhaqaaleed oo wanaagsan oo cunugga, kobcinta hal-abuurkiisa iyo qaabeynta nacasnimada.
Eeg sidoo kale: Beerta nasashada, magaalada iyo kuraasta beerta
Marka la naqshadeynayo garoomada ciyaaraha si kastaba ha noqotee, waa inay ka taxadarto ma aha oo kaliya qalabka soo jiidashada iyo midabada leh, laakiin sidoo kale waa in lagu kalsoonaado qalabka. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la doorto booska ay carruurtu ku ciyaaraan, ha ahaato jardiinada magaalada ama beerta guriga garoomo la aqoonsan yahay.
Eeg sidoo kale: Baaskiilka - Noocyada iyo faa'iidooyinka
Beer goobaha ciyaarta Shirkadaha Metalco waxay kuu ogolaanayaan inaad si nabad ah ugu ciyaarto banaanka mahadnaqa qalabka xiisaha leh ee shaqeynaya ee abuuraya garoonkan ciyaarta. Kuwani waa noocyada kala duwan ee lulmidda loogu talagalay hal ama in ka badan dad, jaranjarooyin, mararka qaarkood farax-tag, wareegyo iyo aalad kasta oo fuulitaanka.
Beerta ciyaarta waa in la hubiyaa amniga ciyaarta aaladahaan oo dhan, taas oo ay tahay in lagu habeeyo da'da iyo awooda jireed ee isticmaalayaasha.
Qalabka iyo alaabada carruurtu ku ciyaarto ee loogu talagalay carruurta ugu yar yar ayaa ah kuwo yar yar, midabbo leh oo hoos u socda si loo fududeeyo isticmaalkooda loona sugo nabadgelyada, xitaa carruurta yaryar ee aan aqlaaqda lahayn. Goobaha lagu ciyaaro ee beerta, halkaasoo carruurta waaweyn ay ku ciyaaraan, ku siiyaan shucuur badan isla markaana dammaanad ka qaadaan madadaalo weyn oo ku saabsan aalado dhib yar. Isticmaalayaasha aadka u ballaaran, heerka dhibku horeba waa mid aad u sarreeya, sidaa darteedna dadka dhallin-yarada ah kuma koobna oo keliya dhaqdhaqaaqa, laakiin sidoo kale waxay yeeshaan xoog iyo adkaysi.
Goobaha carruurta lagu ciyaaro lagu habeeyay beerta, badiyaa waxay ku hodmiyaan dheelitir iyo guryo-ciyaaro lagu dhejiyo dherer. Marka lagu daro dhammaan qalabka ciyaarta, waa inaad sidoo kale xusuusataa dusha sare ee nabdoon ee nuugi doona dhicitaan suurtagal ah. Markaad diyaarinaysid goobta ciyaarta, sidoo kale waxaa habboon in la daryeelo meel aad ku ridi karto kuraas iyo miis si carruurtu wax u cunaan inta ay ku ciyaarayaan ama ku nasanayaan hooska.
Eeg tusaalooyinka dib u soo celinta METALCO
Qalabka garoonka lagu ciyaaro waxaa qaabeeyay Metalco, oo ah hoggaamiye caalami ah dhisme yar Waxaa lagu gartaa naqshad casri ah iyo qaab ergonomic ah, iyo sidoo kale midabbo xiiso leh iyo adkeysi ku filan, taas oo hubinaysa ciyaar aad u fiican oo ammaan ah.
Marka la naqshadeynayo soo saaraha garoomada carruurta waa inay daruuri tahay inay tixgeliso da'da carruurta ay u abuureyso meel lagu ciyaaro oo ay u sameyso meel waalidiinta ama dadka ardayda masuulka ka ah ee ilaaliya carruurta xilliga ciyaarta.
Diyaarinta waxqabadka garoonka beerta waxay ka koobnaan kartaa aalado loogu talagalay carruurta iyo dhallinyarada oo keliya, laakiin sidoo kale loogu talagalay dadka waaweyn iyo waayeelka firfircoon. Meeshan oo kale, xubin kasta oo reerka ka mid ah ayaa wax ka heli kara naftooda oo ma aha oo kaliya madadaalo, laakiin sidoo kale waxay daryeelayaan caafimaadkooda iyo xaaladdooda jireed, intaas oo dhanna waxaa lagu sameyn karaa dibadda iyo iyadoo lala joogo kuwa ay jecel yihiin.
Qalabka loogu talagalay Metalco, abuurista garoomada lagu ciyaaro, waxay ka samaysan yihiin aluminium iyo caag midab leh. Noocan oo kale ah oo xiisa badan oo hal abuur leh ayaa kuu ogolaanaya inaad abuurto qaabab qurux badan oo qaab dhismeed loogu talagalay ciyaarta. Goobta lagu ciyaaro ee jardiinadu waxay u oggolaaneysaa qoyska oo dhan inay ku raaxaystaan, maxaa yeelay carruurta oo keliya maahan, laakiin sidoo kale dadka waaweyn, ayaa doonaya inay ka qaybgalaan cayaaraha dibedda.
Waa in mar kale la xasuusnaado in goobta ciyaarta lagu ciyaaro ay tahay inay hubiso amniga carruurta ku ciyaareysa, sidaas darteed waa mudan tahay in la doorto garoonka ciyaarta oo leh shahaado
Naqshadeynta goobta ciyaarta ee beertu waa waajib tixgeli da'da carruurta ku ciyaareysa, muuqaalka dhulka, iftiinka qoraxda, muuqaalka carruurta ee daaqadaha guriga iyo aagga badbaadada ee dhammaan aaladaha garoonka. Ka sokow aaladaha sida adag loo rakibay, dusha sare ee nabdoon ee dhuuqa dhicitaanka ayaa sidoo kale muhiim ah.
Casri ah garoonka beerta waa maalgashi aan u oggolaaneyn oo keliya cunugga inuu ku raaxeysto farxad weyn, laakiin sidoo kale kordhisa jirkiisa, sidaas darteed waa muhiim in goobta lagu ciyaaro ay damaanad qaado badbaadada ugu badan ee carruurta ku ciyaareysa.
Sidaa darteed, waxaa habboon in la doorto naqshadeeyaha saxda ah iyo soo saaraha qalabka la dhigo goobta ciyaarta, iyadoo la hubinayo u hoggaansanaanta heerarka caafimaadka iyo amniga ee khuseeya.
5 / 5 ( 1 codka )
garoonka ciyaarta la buufin karogaroon lagu ciyaaro oo alwaax ahwaa imisa shahaadada goobta ciyaartameeqa barxad ayaa ku taalsida loo dhiso garoon lagu ciyaarosida loo dhiso goob lagu ciyaaro oo xaabo ahsida loo sameeyo garoon lagu ciyaarosida loo sameeyo garoon ay caruurtu ku ciyaaraanhogaamiyaha garoonka ciyaartaLaamiga goobta ciyaartabeerta lagu ciyaarogaroonka ciyaartagaroomada loogu talagalay dadka waaweyngoobta caruurta lagu ciyaarogaroon lagu ciyaaro carruurta Warsawgaroonka beertagaroon lagu ciyaaro oo alwaax ahgaroon lagu ciyaaro alwaax sida loo sameeyogaroonka ciyaarta ee Gdańskgaroonka GdyniaGoobta ciyaarta KatowiceGoobta ciyaarta Krakowbeerta lagu ciyaarogaroon lagu ciyaaro oo af ingiriisi ahgaroonka ciyaarta poznańsoo saaraha garoonkanaqshadda garoonka ciyaartaGoobta ciyaarta Szczecingaroonka ciyaarta ee beertagaroonka ciyaaraha ee Warsawgaroonka ciyaarta Wrocławgaroonkii ciyaarta lagu aasaygoobaha ciyaartagaroomada lagu qaybiyogaroonka ciyaarta
Eeg qodobbada kale:
Waqtiga xaadirka ah, qalabka guryaha ayaa sidoo kale ku jira daboolida geedka. Waxyaabahan shaqeynaya iyo qurxinta ayaa lagu sameyn karaa agab kala duwan. ...
Nidaamyada qaladka ee loo adeegsado geedi socodka wasakhda qashinka qalalan waxaa loo isticmaali karaa meelo kala duwan. Hada taasi waa…
Saldhigga wasakhowga / xarummaha nadaafadda gacmaha waa wax cusub oo aan ku deeqno iyada oo ah qayb ka mid ah qaab-dhismeedka yaryar. Waa xal fududeynaya ...
Qaab dhismeedka yaryar waxaa abuuray shay yar oo naqshadeeyeyaal ah oo lagu dhex galiyay booska magaalada ama lagu meeleeyay hanti gaar loo leeyahay iyo ...
Waa run in xirfad yaqaanku uu yahay xirfadle bilaash ah oo keeni kara qanacsanaan iyo faa iidooyin badan, laakiin habka loo bilaabo shaqo ...
Qashinka qashin-qubka iyada oo qayb ka ah dib-u-warshadaynta degmadu waxay gacan ka geysaneysaa in meelaha dadweynaha ay nadiif ka yihiin, looga takhaluso dhibaatooyinka la xiriira ...